Garcilaso de la Vega. Ake mashanu akanakisa mannets ekumurangarira | Zvazvino Zvinyorwa
Garcilaso de la Vega, mudetembi mukuru weSpain Renaissance, Akafa pazuva rakaita nhasi muna 1536 kuNice. Hupenyu hwake, hwakazara neuto hwechiuto uye kubudirira, anokwikwidza mukupenya ne ishoma asi yakakosha basa mune zvinyorwa zveSpanish. Mukurangarira kwake ndinonunura 5 yemamsoneti ake kurangarira.
2.1 Sonnet V - Kuita kwako kwakanyorwa mumweya wangu
2.2 Sonnet XIII - Maoko aDaphne akange ave kutokura
2.3 Sonnet IX - Mukadzi wangu, kana ndisipo kwauri ...
2.4 Sonnet VII - Ndiani akarasikirwa zvakanyanya kurasikirwa futi ...
2.5 Sonnet XIV - Saamai vanyoro, kuti vanotambura ...
Akazvarirwa mukati Toledo, mukati memhuri inokudzwa yeCastilian. Kubvira achiri mudiki kwazvo, akapinda munhau dzezvematongerwo enyika dzeCastile kusvika muna 1510 paakapinda padare raMambo Charles I. Akatora chikamu muhondo dzakawanda dzehondo nevezvematongerwo enyika uye akapinda mu kufambira kuRhodes, muna 1522, pamwe chete ne Juan Boscan, waaiva shamwari yakanaka. Muna 1523 akagadzwa knight yeSantiago uye, makore mashoma gare gare akatama naCarlos I kuenda Bologna kwaakagadzwa korona yekuva mambo.
Akatambura hutapwa ndokuzoenda ku Naples, kwayakagara. Zvisinei, mukurwisa nhare yeMuy, muFrench Provence, aive akakuvadzwa zvinouraya muhondo. Mushure mekuendeswa kune Zvakanaka akafira ipapo pazuva rakaita nhasi 1536.
Basa rake diki rakachengetedzwa, rakanyorwa pakati pe1526 kusvika zviuru gumi, rakabudiswa nenzira afa pamwechete neyaJuan Boscán pasi pezita rekuti Iwo mabasa eBoscán nevamwe veGarcilaso de la Vega. Iri bhuku rakavhura iyo Literary Renaissance muSpanish Tsamba. Iko kukurudzira kwevanyori veItaly uye metric kunogona kuoneka pachena mune rake rese basa uye Garcilaso akagadzirisa iwo kumita yeCastilian nemhedzisiro yakanaka kwazvo.
Nezve izvo zvirimo, mazhinji enhetembo dzake anoratidza izvo kuda kukuru naGarcilaso yemukadzi wechiPutukezi Elizabeth freyre. Akasangana naye kudare muna 1526 uye kufa kwake muna 1533 kwakamubata zvakanyanya.
Ini ndinosarudza idzi 5 sonnets kunze kwe makumi mana vakanyora, kuwedzera kune 3 eclogues.
Sonnet V - Kuita kwako kwakanyorwa mumweya wangu
Ndine zvakawanda sei zvandiri kureurura kuti ndine chikwereti newe;
Sonnet XIII - Maoko aDaphne akange ave kutokura
Maoko aDaphne akange ave kutokura,
uye mumabouquets marefu akatenderera akazviratidza;
mumashizha egirini ndakaona kuti akava
vhudzi rakasviba negoridhe.
Nemakava akaoma vakavhara
mitezo nyoro, ichiri kufashaira, yaive:
tsoka dzakachena pasi dzakawira pasi,
uye dzakashanduka dzikava midzi yakakombama.
Uyo aikonzera kukuvara kwakadai,
nekuchema kwekuchema, ndakakura
uyu muti wakadiridza nemisodzi.
Haiwa nyika inosiririsa! Ah zvakaipa kukura!
Izvo nekuchema zvinokura mazuva ese
chikonzero uye chikonzero nei akachema!
Sonnet IX - Mukadzi wangu, kana ndisipo kwauri ...
Mukadzi wangu, kana ndisipo kwauri
muhupenyu huno hwakaoma uye ini handife,
zvinoita kwandiri kuti ndinotadzira zvandinokuda,
uye kune zvakanaka izvo aifarira kuvapo;
mushure meizvi ndinonzwa imwe tsaona,
ndiko kuona kuti kana ndikaora moyo,
Ndinorasikirwa nezvakanaka zvakawanda zvandinotarisira kubva kwamuri;
Uye saka ndinofamba mune zvandinonzwa zvakasiyana.
Mune mutsauko uyu pfungwa dzangu
ivo, mukusavapo uye mukuomesa musoro,
Ini handichaziva zvekuita muhukuru hwakadai.
Handimbovaone pamwe chete asi vachipesana;
zvehunyanzvi hwakadai vanorwa usiku nemasikati,
kuti ivo chete vanobvumirana pane kukanganisa kwangu.
Sonnet VII - Ndiani akarasikirwa zvakanyanya kurasikirwa futi ...
Usarasikirwe nevazhinji varasikirwa zvakanyanya,
zvakwana, rudo, chii chaitika kwandiri;
kundidzivirira pane zvawanga uchida.
Ndakapfekedza tembere yako nemadziro ayo
yenguo dzangu nyoro uye yakashongedzwa,
sezvazvinoitika kune akatotiza kare
Ndasununguka kubva mudutu randakanga ndaonekwa
Ndakanga ndapika kuti handichazopindizve,
nesimba rangu uye nemvumo yangu,
mune imwe njodzi yakadai, sekusabatsira.
Asi izvo zvinouya handichakwanise kushandisa;
uye neizvi handipikisane nemhiko;
kuti haina kuita sevamwe kana muruoko rwangu.
Sonnet XIV - Saamai vanyoro, kuti vanotambura ...
Saamai nyoro, kuti vanotambura
mwanakomana ari kumubvunza nemisodzi
chimwe chinhu, chayo kudya
Iye anoziva kuti huipi hwaanonzwa hunofanira kukotama,
uye rudo rwekunamata harumutenderi
iyo inofunga kukuvara kuri kuita
zvaanomukumbira kuti aite, anomhanya,
nyaradza kuchema uye zvakapetwa tsaona,
saka kune yangu yekurwara uye kupenga kufunga
kuti mukukuvara kwake anondibvunza, ini ndingade
bvisa iyi yekuchengetedza inouraya.
Asi ndibvunze uye chema zuva nezuva
zvekuti ndinobvuma kuti anoda zvakadii,
vachikanganwa mhanza yavo uye kunyange yangu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Garcilaso de la Vega. Yake mashanu akanakisa mannets ekumurangarira